U-PoePoe Ungumbungazi ovelele
'Iya Ora Na,
I-bungalow encane elula engadini. Ogwini lolwandle, endaweni enkulu yangasese (~ 2 000 m2). Itholakala ngasekugcineni komgwaqo (PK0). Ngemizuzu emi-2, uzothola isitolo esiseduze lapho ungathenga khona konke okudingayo ukuze udle. Uzojabulela ukubuka kolwandle kusukela ethafeni le-bungalow kanye nokubuka i-Wave edumile ye-Teahupo'o. Ngitholakala endaweni ecishe ibe ngamamitha angu-300 futhi Ngemizuzu emi-5 ngesikebhe ukuya endaweni yokuphumula yamadwala e-Teahupo'o. Mina nomndeni wami sizojabula ukukwamukela ekhaya. Ngethemba ukuthi uzokujabulela!
I-bungalow Ārānuanua engadini yethu
I-bungalow encane efakwe ngokugcwele, yabantu abangu-4.
Uma ubhukha e-Moana @ Teahupo'o, uzoba ukuphela kwezihambeli endaweni, ngaphandle kwethu. Iba yindawo Ekhethekile, ukuyithokozela ngokugcwele, indawo enhle nendawo yokuyijabulela!
Uma iqembu elikhulu noma umndeni, kungenzeka ukubeka amatende engadini. Bhukha ku-airbnb, Moana @ Teahupo'o Camping noma ungithumelele umlayezo ngokuqondile futhi sizobona ndawonye imigomo yokubhuka.
Ukubuka okuhle kolwandle kusuka kumbhede wakho ongusayizi wenkosi onemibhede emi-2 yabantu abangabodwa.
Ikhishi elincane namaShower onawo, ahlukene negumbi lasebusuku
Gxuma embhedeni wakho, futhi ubhukude olwandle usuka eYadini.
Iba nekhefu, futhi ubukele abatshuzi bendawo nabachwepheshe besebenzisa i-Reef Break edumile ye-Teahupo'o !
Ukusefa, ukugwedla ukugibela isikebhe, i-snorkeling, ukuqwala izintaba, i-kayaking, ukuvakashela imigede, izimpophoma nemifula, gxilisa umlando nezinganekwane ze-Teahupo'o
Izwe ngabantu bendawo nabavikeli abavela lapha, ezinyathelweni ezi-2. Umndeni wami uzokwabelana nawe ngalolu lwazi ngendawo, indawo, isiko abalufunda kumaTupuna (okhokho bethu). Bhuka kusengaphambili, umsebenzi wakho, vele ungithumele umlayezo futhi ngizokwabelana ngoxhumana nabo.
AYIKHO IMPAHLA YOKUBHEMA!
IZINJA, sinezithandani ezinobungane
Sisuka eduze kwakho nje, endlini yethu, endaweni efanayo.
Uma udinga noma yiluphi ulwazi vele uze uzosibona.
Indawo enokuthula nethule, lapho ungajabulela khona amachibi nezintaba.
Kusuka endlini esogwini:
- Gxila endaweni yokusefa, ukuze uthole ubudedengu obukhulu ^_^*
- Noma Thatha isikebhe setekisi ukuze wehle noma ubuke abatshuzi ihora
- Snorkle eduze kwetshe elincane esiteshini, uzobona inqwaba yezinhlanzi ezinemibala futhi mhlawumbe ama-stingray, izimfudu... uma unenhlanhla!
- Qasha ibhodi lethu lePaddle eline-inflatable ukuze uligibele ekushoneni kwelanga noma ukuphuma kwelanga.
- Gxumela esikebheni sikamalume ukuvakasha kwesigamu sosuku ukuze uthole i-"TE PARI" yethu enhle e-"Fenua Aihere" ingxenye engaphucukile yesiqhingi esincane. Ayikho indlela yokufinyelela ngezikebhe kuphela, ingxenye egcwele uhlaza lukanokusho, izimpophoma, imifula, imigede... Umalume wami uyibhayibheli le-teahupoo history & mystic legends, zivumele uthathwe izindaba zakhe.
- Hamba nomzala wami, thola izintaba, umlando kanye nezinganekwane naye, thola i-TE PARI ngendlela ehlukile
- Noma nje u-farniente engadini ubheka isikebhe esidlulayo futhi wonke umuntu uyanyakaza ukuze athi sawubona kuwe ^_^*
Indawo yami isemizuzwini emi-5 ukuya e-marina ye-teahupoo nasekupheleni komgwaqo, lapho ongaya khona kalula ngemisebenzi noma ubambe izikebhe zamatekisi. Izinkampani eziningi zokuvakasha ngezikebhe zisuka lapho.
Futhi idolobhana elincane laseTaravao lapho uzothola khona izitolo ezinkulu (Carrefour, Super U), ikhemisi, isibhedlela, odokotela, igalaji likaphethiloli, i-atm... @ 20 min ngemoto uma kudingeka.
Siyajabula ukwabelana nawe ngeNdawo yethu.
Sihlala endlini eseduze ne-bungalow. Ngakho-ke uma unombuzo, ngizojabula ukuwuphendula. Ngihlala ngikhona ukuze ngingene
Ungangabazi ukusebenzisa i-#moana_at_teahupoo ukuze wabelane ngenjabulo yakho ezinkundleni zokuxhumana. Ikhasi lami le-IG @Moana_at_teahupoo ^_^*